Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny tantaran'ny Instagram. Martech Zone
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny tantaran'ny Instagram
Alarobia, Desambra 13, 2017 Alarobia, Septambra 2, 2020 Douglas Karr
Instagram dia manana 250 tapitrisa mpampiasa isan'andro ary manana tombony tsy mampino amin'ny orinasanao izany, indrindra rehefa mandray ny Instagram Stories endri-javatra. Fantatrao ve 20% amin'ny orinasa mandray hafatra mivantana vokatry ny Tantara? raha ny marina, 33% amin'ireo tantara malaza rehetra dia ampakarin'ny orinasa!
Inona ny tantaran'ny Instagram?
Ny tantara Instagram dia mamela ny orinasa hizara sary Tantara tamin'ny androny, ahitana sary sy horonan-tsary marobe.
Zava-misy momba ny tantara Instagram
Mandra-pahoviana ny tantara Instagram? 15 segondra tsirairay.
Mandra-pahoviana vao hanjavona ny Tantara Instagram? Azo jerena mandritra ny 24 ora fotsiny izy ireo.
Ampahibemaso ve ny tantaran'ny Instagram? Manaraka ny alalana napetrakao amin'ny mombamomba anao izy ireo.
Karazana horonantsary inona no azo ampakarina ao amin'ny Instagram Stories? Endrika MP4 miaraka amina audio H.264 Codec & AAC, bitrate video 3,500 kbps, taham-bidy 30fps na ambany, 1080px malalaka, ary farafahakeliny farafahakeliny 15mb.
Afaka mampiasa fitambarana sary, horonan-tsary, ary boomerangs ao amin'ny tantaranao Instagram.
Lakilen'ny fahombiazan'ny tantara Instagram
Ity infographic antsipirihany avy amin'ny Headway Capital mitaingina anao tsy mamorona tantara fotsiny, fa mihoatra ny fananganana paikady Instagram. Ireto misy torohevitra vitsivitsy hahombiazana:
Manomana cohesive tetika hahazoana ny fananana rehetra ilainao hamoronana ilay tantara tadiavinao.
Misafidiana a fotoana toerana anaovan'ny mpanaraka anao.
Manaova fiantraikany ao anatin'ny 4 segondra voalohany ka mijanona mandritra ny fotoana sisa ny mpijery anao.
Tifiro ny tantaranao mitsangana - ny fomba hijeren'ny mpihaino azy azy.
Use geotag hitrandrahana fifandraisana 79% bebe kokoa amin'ny kendrena isam-paritra.
Mamorona tsotra arrow ho an'ny mpijery mba hikosoka hanaraka ny tranokalanao.
Tafiditra mifantoka tenifototra ka ny tantaranao dia tafiditra ao anaty peratra Tantara.
Mampiasà fampiharana toa CutStory hametahana ny tantaranao ho lasa andian-tantara.
Farano amin'ny tantara mafy ny tantaranao miantso-to-hetsika hamporisihana ny fifamofoana.
Eritrereto ny hahazoana ivelany hery miasa mangina handraisana ny tantaranao dia mampiroborobo ny fifampiraharahana efa ho 20%!
Mampiasà endrika tsy ara-potoana an'ny Tantara hananganana fifandraisana sy hanome a behind the scenes jereo ny orinasao.
Omeo ny mpijery Tantara tolotra tokana hahafahanao manara-maso azy ireo sy manome valisoa azy ireo noho ny tsy fivadihan'izy ireo.
Mampiasà Tantara hanosehana a fitsapan-kevitra mivoaka amin'ny mpihaino anao amin'ny fampiasana sticker. Ataovy fohy sy mamy izy, 27 fotsiny ny tarehinao!
Ny tantara Instagram dia nitombo be hatramin'ny nanombohany ny volana aogositra 2016, ary ny fahitana ny fomba hanaovana ny ankamaroany dia ho tombony lehibe amin'ny ezaky ny haino aman-jery sosialy. Inona no andrasanao? Manomboha milaza ny tantaranao izao. Nivine avy any Headway Capital
Ity ny infographic lehibe, Torolàlana momba ny orinasa kely amin'ny tantara Instagram:
Tags: Instagraminstagram storiesLahatsary Marketingtantara
Conversica: Fifandraisana, fidirana, fikolokoloana ary fahaiza-manao amin'ny fampiasana mpanampy AI
Gong: Sehatra fitsikilovana resaka momba ny ekipa mpivarotra